About – Ko Phyo
My name is Ko Phyo (aka) Myo Kyaw Htun. I finished my Master degree in Master of Information Science at Assumption University of Thailand. I am currently residing and working as Web programmer in Bangkok.
I’m co-founder of MountMandalay with my brother and we develop web site, web design and software.
The is the blog where I write posts with my mother language, Myanmar/Burmese. If you find the content are in  square shape, you will need to download Myanmamar unicode font. (Mac OS snow leopard and above, and Windows 8 has built in Myanmar font).
ကျွန်တော့်နာမည် မျိုးကျော်ထွန်းပါ။ ကိုဖြိုးလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီး Computer Science ဘွဲ့ရခဲ့သလို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ Information Science နဲ့ master ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ web developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
၂၀၀၁ ဝန်းကျင်လောက်က david bacon English-Myanmar typing tutor ကိုရေးသားပြီးကတည်းက programming ပိုင်းကို တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ web design, logo design, software and web development တွေ လုပ်ပေးတဲ့ MountMandalay ကို အစ်ကိုဖြစ်သူ မျိုးဟန်ထွန်း နဲ့ တည်ထောင်ထားပါတယ်။
Programming နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို စိတ်ဝင်စားသလို design, art နဲ့ photography ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။